Ilo-wareedyo sirdoon oo sheegay in hoggaamiyihii Al-Shabaab uu geeriyooday - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaIlo-wareedyo sirdoon oo sheegay in hoggaamiyihii Al-Shabaab uu geeriyooday
June 27, 2018 Puntland Mirror Somalia 0
Hoggaamiyaha maleeshiyada Al-Shabaab Axmed Cumar Cubeydah. [Sawir Hore]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Warar sirdoon ayaa sheegaya in hoggaamiyihii maleeshiyada Al-Shabaab uu geeriyooday.
Sargaal sirdoonka Soomaaliya katirsan oo magaciisa qariyay ayaa laanta Af-Soomaaliga ee VOA u sheegay in Axmed Cumar Cubeydah uu ku geeriyooday meel kutaala koonfurta Soomaaliya Isniintii.
Bishii lasoo dhaafay, Wargeyska fadhigiisu yahay dalka Kenya ee The Star ayaa daabacay in hoggaamiyaha Al-Shabaab uu la tacaalayo xanuunka kansarka ama kaankarada oo kaga dhacay caloosha.
Balse, ma jiraan wax war ah oo rasmi ah oo kasoo baxay Al-Shabaab oo ay ku xaqiijinayaan dhimashada hoggaamiyahooda.
Abu Cubeydah ayaa badalay hoggaamiyihii hore ee Al-Shabaab Axmed Cabdi Godane kaasoo lagu dilay duqeyn diyaaradaha Mareykanka sanadkii 2014-kii.
Maleeshiyada Al-Shabaab oo sanadkii 2006-dii la asaasay ayaa mar maamuli jiray inta badan deegaanada koonfurta Soomaaliya oo ay ku jirto caasimada Muqdisho, balse sanadihii u dambeeyay ayaa deegaano badan banaanka looga saaray.